I-Forex Trading Calculators | I-Margin, i-Pip, i-Pivot ne-Position Calculator
Ikhaya / Trading / I zixhobo ze Forex / Forex Calculators
Ubungakanani bee-Forex Calculators
Siye savelisa uluhlu oluyingqayizivele lwababalawuli oluza kubanceda ukusebenza kwabahwebi bethu. Ngamnye uye waqulunqwa ngokucophelela ngeemfuno zabahwebi phambi kweenjongo zethu zophuhliso. Kulo qo kelelo: i-calculator yesayizi yokubala, i-calculator ye-margin, i-calculator pips, i-calculator ye-pivot kunye nokubala kwemali. Kubalulekile ukuba abahwebi bazifundele ngeenxalenye zezi balawuli, njengoko banokukunceda ukuphuhliswa kwesicwangciso kunye neqhinga lokurhweba, ngengozi nokuvezwa kweso sicwangciso. Ezi zibalo zingancedisa abahwebi ukuba baphephe iimpazamo ezingundoqo, umzekelo; Isikhundla esingafanelekiyo sokumisa ngesigxina esisodwa sezinga lokugqibela singakwandisa ingozi nganye ngentengiso ngokubanzi.
Isixhobo esibaluleke kakhulu ukulawula ukukhutshwa kwemarike yakho nayiphi na yorhwebo, inqaku likuvumela ukuba ubale ngokuthe ngqo umda oza kuwufuna ukuze ufake indawo yorhwebo.
umzekelo: ukuba ufuna ukuthengisa idireji yesixazululi se-EUR / USD, kwixabiso elithatyathwe kwi-1.04275, kwi-trade size ye-10,000 *, usebenzisa ubukhulu be-1: 200 uze ufune ukuba neerandi ze-52.14 kwi-akhawunti yakho ukuze uhlawule ukuchazwa.
elinye iqashiso lilingana neeyunithi ze-100,000.
Esi sixhobo esilula siya kunceda abahwebi, ngokukodwa abathengisi be-novice, ngokubala iipips zabo ngorhwebo.
umzekelo: Siza kuphinda sisebenzise isibonelo sethu se-EUR / USD; ukuba ufuna ukuthengisa idilesi enkulu yesixa-mali se-EUR / USD, ngentengo ecatshulwayo ye-1.04275, ngobukhulu bezorhwebo lwe-10,000, ngoko lilingana nombhobho omnye. Ngako oko ubeka engozini enye ipayipi nganye.
Amanqwanqwa amaninzi okurhweba aya kubala ngokuzenzekelayo amaphuzu e-daily pivot, kunye naba bathengisi beetekisi banokulinganisela iindawo zabo ezicacileyo zepivot; kwinqanaba lemihla ngemihla, ukumelana kunye namanqanaba okuxhasa. Uvele ufake iphakamileyo yosuku oludlulileyo, ixabiso eliphantsi kunye lokuvala naluphi na ukhuseleko olunikeziwe. I-calculator izakugqiba ngokuzenzekelayo ukujonga amanqaku ahlukeneyo. Ezi ndawo ziphambili ziindawo eziphambili apho abahwebi abaninzi baya kuzibeka khona, mhlawumbi ngokwemiqathango yoku: ukungena, ukuyeka nokuthatha imiyalelo yesigxina.
Esinye isisombululo esibalulekileyo sabathengi abanolwazi, okanye abadayisi be-novice, le calculator ibalulekile ekulawuleni umngcipheko ngezohwebo kunye nokubeka esweni ukutyhila kwakho kwiimarike.
umzekelo: Saphinda sisebenzise ididi yesixa-mali se-EUR / USD. Ufuna ukubeka ingozi kwi-1% ye-akhawunti yakho nganye yorhwebo. Ufuna ukuyeka ukuphela kwee-pips ze-25 kude nexabiso langoku. Unayo i-akhawunti yobukhulu be-50,000 ye-$, ngoko uya kusebenzisa ubungakanani besikhundla samashishini amabini. Ngokwenyani uya kuba yingozi kwi-500 kworhwebo, xa ukulahleka kwakho kokuyeka kusebenze oku kuya kuba yilahleko yakho.
Mhlawumbi elula kwaye ngokungathandabuzeki eyona nto iqhelekileyo kwezixhobo zethu zokurhweba, umguquleli wemali uvumela abahwebi ukuba baphendule imali yabo yasekhaya ibe yenye imali.
umzekelo: Ukuba ufuna ukuguqula i-€ 10,000 ukuya ku-$ 10,000 umphumo ngu-10,437.21USD. Ngesiseko sokuba i-1 EUR = i-1.04372 USD kunye ne-1 USD = i-0.958111 EUR.
Ezi zibalo zifikeleleka kwi-Hub Hub kubaThengisi be-akhawunti ye-FXCC.